माधव नेपालपट्टि लागेर केपी ओलीलाई फकाउन खोज्दै गोकर्ण विष्ट, सम्भव होला ? – नेपाली संगसार
माधव नेपालपट्टि लागेर केपी ओलीलाई फकाउन खोज्दै गोकर्ण विष्ट, सम्भव होला ?
नेपाली संगसार calendar_today १३ जेष्ठ २०७८, 5:56 am
काठमाडौँ । एमाले नेता गोकर्ण विष्टले अझै पनि एमालेमा एकता कायम गर्न सकिने बताएका छन् ।
बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उनले २०७५ जेठ २ मा फर्किए अझै पनि एमाले एकता जोगिने बताएका हुन् ।
विष्टले पार्टी एकता जोगाउन अन्तिम क्षणसम्म पनि इमान्दार प्रयत्न गर्ने बताएका छन्।
पार्टी र जनसंगठनका सबै तहका कमिटीहरूलाई २०७५ जेठ २ को पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएर मात्रै एकता जोगिने उनको भनाइ छ । उनले आफू अझै पनि पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भन्दै जेठ २ को बटमलाइन अघि सारेका हुन्।
बुधबार माधव नेपाल पक्षले निकालेको १५ स्थायी कमिटीका सदस्यको संयुक्त बक्तव्यमा विष्टले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । मिडिया डबलीबाट